क्यानाइन कन्जाक्टिवाइटिसलाई निको पार्ने घरेलु उपचार कुकुरहरु को विश्व
क्यानाइन कन्जेक्टिवाइटिसलाई निको पार्ने घरेलु उपचार
लुर्ड्स सरमिआन्टो | | रोगहरू
कन्जेक्टिवाइटिस एक रोग हो जसलाई निको पार्नको लागि चिकित्सा उपचारको आवश्यक्ता पर्दछ। थप रूपमा, यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि यसलाई सजिलैसँग फैलिन सकिन्छ यदि जनावरलाई छुनु अघि र पछाडि हात सफा गर्ने जस्ता आधारभूत सरसफाईको शृंखलाहरू लिएका छैनन् भने। त्यसो भए पनि, समस्याहरूबाट बच्न हामी केहि चीजहरू गर्न सक्दछौं जुन हाम्रो प्यारीलाई सकेसम्म चाँडो निको हुन मद्दत गर्दछ।
तसर्थ, तल हामी तपाईंलाई भन्न लागिरहेका छौं क्यानान कन्जाक्टिवाइटिसलाई निको पार्न सबैभन्दा प्रभावकारी घरेलु उपचार के के हुन्?.
1 सब भन्दा बढी प्रयोग गरिने घरेलु उपचार
1.1 उनको आँखा क्यामोमाइलले सफा गर्नुहोस्
1.2 तातो / चिसो कम्प्रेसमा राख्नुहोस्
1.3 उनलाई एक एलिजाबेथन कलर राख्न विचार गर्नुहोस्
1.4 उसलाई गुणस्तरीय आहार दिनुहोस्
1.5 शारीरिक सीरम प्रयोग गर्नुहोस्
1.6 एन्टियललेर्जिक आँखा ड्रप (एलर्जीको मामलामा)
2 कुकुरमा नेत्रश्लेष्मलाइट्स के हो?
3 कसरी कुकुरहरुमा नेत्रश्लेष्मलाशोधी निको हुन्छ?
4 यो कति लामो हुन्छ?
5 यो कसरी फैलिन्छ?
सब भन्दा बढी प्रयोग गरिने घरेलु उपचार
उनको आँखा क्यामोमाइलले सफा गर्नुहोस्
क्यामोमाइलमा जीवाणुरोधी गुणहरू छन् जुन शताब्दीयौंदेखि आँखा संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिएको छ। आजकल, अझै त्यहाँ एक उत्तम घरेलू उपचार, र तयार गर्न को लागी सब भन्दा सजिलो मध्ये एक हो।
तपाईंले भर्खर क्यामोमाइलको इन्फ्यूजन बनाउनु पर्छ (तपाईं यो सुपरकेट्समा बेच्ने सचेटहरूसँग गर्न सक्नुहुन्छ), चिसो र सफा धुप गिलाउन दिनुहोस् र त्यसपछि आँखा सफा गर्नुहोस्। त्यसो भए, अर्को गौजको साथ, अर्कोसँग पनि यस्तै फेर्नुहोस्।
तातो / चिसो कम्प्रेसमा राख्नुहोस्
एकातिर तातो र चिसो पानी कम्प्रेसले तपाईंको कुकुरमा नेत्रश्लेष्मलाशोथका लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।। चिसो हुँदा रातोपन कम गर्दछ र सूजन, तातोले जलन कम गर्दछ। अवश्य पनि, यसले प्रभाव लिनको लागि तपाईंले तिनीहरूलाई पाँच मिनेटको लागि छोड्नुपर्दछ।
उनलाई एक एलिजाबेथन कलर राख्न विचार गर्नुहोस्
यदि तपाईंको प्यारी स्पष्ट रूपमा अप्ठ्यारो देखिन्छ र प्रभावित आँखा खरोंच गर्न रोक्दैन भने, यो एक एलिजाबेथन कलर राख्न आवश्यक हुन सक्छ। तपाईंले पशु चिकित्सा क्लिनिकहरूमा बिक्रीको लागि यस प्रकारको हारहरू फेला पार्नुहुनेछ, तर पशु उत्पादन स्टोर र अनलाइन स्टोरहरूमा पनि।
उसलाई गुणस्तरीय आहार दिनुहोस्
हामी खानेहरू हौं। ताकि शरीरले यसले असर गरिरहेका सूक्ष्मजीवहरू विरूद्ध लड्न सक्छ, तपाईलाई चाहिने सबै पोषकहरू लिनु पर्छ। तसर्थ, यो अत्यधिक अन्नको फल दिन सिफारिस गरिन्छ जुन अनाज वा उप-उत्पादहरू छैन।
शारीरिक सीरम प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाइँ पशु चिकित्सकसँग चिन्ता गर्नुहुन्छ कि तपाईको कुकुरलाई उसको आँखामा यस प्रकारको समस्या छ। निश्चित रूपमा यसले तपाईलाई नुन समाधान प्रदान गर्दछ, ताकि तपाईं कुकुरको त्यो आँखा क्षेत्र सफा गर्नुहोस् जुन प्रभावित भइरहेको छ।
यसले हाम्रो कुकुरलाई यो अवस्थाले कम अस्वस्थता महसुस गराउँदछ, जुन प्राय: ल्यागासको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन निकालिनु पर्छ। तपाईं सबै फार्मेसीहरूमा फिजिकल सलाईन पाउनुहुनेछ र तपाईं आवश्यक रूपमा धेरै अनुप्रयोगहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले गजमा यस समाधानको थोरै स्थान राख्नुपर्दछ र यससँग प्रभावित स्थानलाई विशेष ध्यान दिएर मसाज गर्नुहोस्।
एन्टियललेर्जिक आँखा ड्रप (एलर्जीको मामलामा)
यो सबै केसहरूमा हुँदैन, तर यो प्राय: त्यसो हुन्छ केही कुकुरहरूले एलर्जीबाट नेत्रश्लेष्मलाशोधी प्राप्त गर्छन्। यो केहि प्रकारको विदेशी शरीरको घुसपैठिको कारणले हुन सक्छ, तर तत्वसँग घर्षणको कारण पनि हो कि धेरै अन्य सम्भावनाहरू बीचमा एलर्जी हुन्छ।
पेशेवरले हामीलाई यो तरल प्रयोग गर्न सिफारिस गर्नेछ, जुन कुकुरको लागि समाधानको मतलब हुनेछ यी केसहरूमा एन्टी-इन्फ्लेमेटरी कम्पोनेन्टहरू आवश्यक छन्। तपाइँले प्रभावित आँखामा केही थोपा मात्र राख्नुपर्नेछ। केही कुरा जुन तपाईले ख्याल राख्नु पर्छ त्यो यो हो कि यदि यसको कारणले यो आँखामा केही प्रकारको घाउ रहेको छ भने तपाईलाई विशेषज्ञलाई भेट्नु पर्छ, किनकि यसले धेरै सहयोग गर्दैन।
हाम्रो प्रिय कुकुरहरुमा नेत्रश्लेष्मलाइटिस सम्बन्धी औषधीय गुणहरु भएका वनस्पतिहरु मध्ये एक थाइम हो। यस बोटको महत्त्वपूर्ण विरोधी भडकाउने विशेषताहरू छन् साथ साथै कीटाणुनाशक पनि हो, त्यसैले यो कुनै पनि प्रकारको नेत्रश्लेष्मलाइटिसको उपचारका लागि अनुकूल छ, यो संक्रामक वा एलर्जी हो।
तपाईंले एक जलसेक बनाउनु पर्छ, त्यसपछि यसलाई तनाव र यसलाई न्यानो नभएसम्म यसलाई चिसो पार्नुहोस्। एक पटक चिसो भयो भने प्रयोग गर्नु पर्छ, किण्वनको स्थितिमा पुग्न बिना नै, यसले अधिक ब्याक्टेरिया ल्याउँछ। यस इन्फ्यूजनमा भिजेको गजसँग तपाईंले सावधानीपूर्वक मसाजको साथ तपाईंको पालतू पशुहरूको प्रभावित आँखा सफा गर्नुहुनेछ।
त्यस्तै प्रकारले यो थाइमको साथ हुन्छ, oregano पनि उही तरीकाले प्रयोग गरीन्छ, तपाईंको कुकुरको प्रभावित आँखामा लागू गर्न यससँग एक जलसेक बनाउने समान प्रक्रियाको साथ, कंजक्टिवाइटिसको उपचार गर्नको लागि लाभदायक गुणहरूको साथ एक प्राकृतिक उपचार।
ओरेगानोको अनुकूल विशेषताहरूले यसको एन्टिफंगल गुणहरूसँग गर्नुपर्दछ विरोधी भडकाउने र जीवाणुरोधीको रूपमा, जसले यो एलर्जी एजेंटहरूसँग वा ब्याक्टेरिया वा फंगीको कारणले हुने नेत्रश्लेष्मलाशित प्रकारको उपचार गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ। यसको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी कम्पोनेन्टले उल्लेखनीय रूपमा सूजन र जलन कम गर्दछ।
तपाइँको घरपालुवा जनावरलाई सुधार गर्न अझ धेरै मद्दत पुर्‍याउन सक्ने अर्को घरेलु उपचारहरू प्राकृतिक क्यालेन्डुलाको साथ एउटा जलसेक बनाउनु हो, गुणहरूको ठूलो संख्याको लागि, जस मध्ये एन्टि-भड़काउने, जीवाणुरोधी, सुखदायक र एन्टिसेप्टिक हुन्।
माथि उल्लेखित बोटबिरुवाबाट क्यालेन्डुला छुट्याउने एउटा अंश यो हो यो उपचार गुणहरु दिन्छ, जसले ती आँखाहरूका केही प्रकारको घाउ हुने ती कन्जाक्टिवाइटिसका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण बनाउँदछन्। कुकुरहरूमा जीवाणु कंजक्टिवाइटिसको सबै केसहरूको लागि यो धेरै प्रभावकारी छ।
शक्तिशाली जीवाणुरोधी र विरोधी भड़काउने गुणहरू जसले सौंफको स्वामित्व राख्छ यसलाई अर्को प्राकृतिक उपचार बनाउँदछ जुन क्यानाइन नेत्रश्लेष्मलाशोथका बिभिन्न मामिलाहरूसँग डील गर्न प्रयोग गर्दछ।
सौंफको महत्त्वपूर्ण कारक यो हो कि यसमा घटकहरू छन् जुन हाम्रो पाल्तु जनावरको आँखामा रातोपन गायब हुन मनपर्दछ, साथै थप ब्याक्टेरिया घटाउन को लागी धेरै उपयुक्त छ, एक ब्याक्टेरिया कंजक्टिवाइटिस को मामला मा।
कुकुरमा नेत्रश्लेष्मलाइट्स के हो?
मानिसहरूलाई कंजक्टिवाइटिसको साथ कुकुरहरूले पनि यस अवस्थाबाट पीडित छन्। यो मुख्यतया एक सूजन हो, जो नेत्रपेशीय झिल्लीमा हुन्छ जुन आँखा कभर गर्नको लागि जिम्मेवार छ, एकै पलकमा पन्जामा सूजन उत्पन्न गर्दछ जसले तपाईंको कुकुरलाई एकदमै खास अप्ठ्यारो उत्पन्न गर्दछ।
यो झिल्ली यसको सामान्य राज्यमा चिपचिपापन विशेषताहरू छन्।, एक धेरै पातलो तह र पनि पारदर्शी, तर यो अन्तिम पक्ष नेत्रश्लेष्मलाइटिसको बखत हराउने छ, यो टिश्यु रातो हुनेछ, एकै समयमा उत्पन्न, तपाईंको प्यारी कुकुरको आँखामा जलाउने, सूजन र च्यात्ने।
जसरी यो समस्या हो जुन मानिसहरूलाई धेरै सामान्य रूपमा प्रभाव पार्दछ, क्यानाइन नेत्रश्लेष्मलाइटिसको सन्दर्भमा यो एक रोग पनि हो जुन निश्चित आवधिकता भएका कुकुरलाई हुन सक्छ। यद्यपि यो हाम्रो कुकुरहरु को लागी एक धेरै महत्वपूर्ण कष्टप्रद संकेत गर्दछ, यस रोगले हाम्रो पशुहरूको आँखामा समय अवधि गर्दछ र यो विकारको लागि हाम्रो घरपालुवा जनावरहरूको दृश्यलाई स्थायी रूपमा असर गर्न धेरै गाह्रो छ।
कसरी कुकुरहरुमा नेत्रश्लेष्मलाशोधी निको हुन्छ?
तपाईको कुकुरलाई जे भए पनि र तपाईमा जे पनि आँखाको जलन हुन्छ। सधैं तपाईंले गर्नुपर्ने पहिलो चीज भनेको पशु चिकित्सा पेशेवरको सल्लाह लिनु हो, जसले तपाईंलाई तपाईंको पाल्तु जनावरहरूको विशिष्ट समस्याको लागि सही प्रकारको निदान दिन्छ।
यसको मतलब यो हो कुनै पनि परिस्थितिमा हामी आफैले उपचार को एक प्रकार छनौट गर्नु हुँदैन, हाम्रो कुकुरले अनुभव गरिरहेको नेत्रश्लेष्मको विशिष्ट केस के हो भनेर जाने बिना।
Si नेत्रश्लेष्मलाशोथ यो आँखाको अवस्थाको कारणले गर्दा हो जुन हामीले उल्लेख गर्यौं, कुकुरले हुन सक्ने यस रोगको कुनै अन्य प्रकारको साइड इफेक्ट बिना नै, उपचार विशेष गरी आँखा सफा गर्नेमा आधारित छ केहि समाधानमा भिजेको गोजलाई प्रयोग गरेर।
केहि अन्य समयमा सामयिक समाधानहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गरियो, तर छाला द्वारा अवशोषण धेरै गाह्रो छ, साथ साथै यसको अनुप्रयोग र यो यस क्षेत्र धेरै नाजुक छ भन्ने तथ्यको साथ गर्नुपर्दछ।
घटनामा कि तपाईंको कुकुरले बारम्बार नेत्रश्लेष्मलाशो प्रस्तुत गर्‍यो, र तपाईं यस्तो गर्नुहोस कि यस्तो फेरि हुने छैन, तपाईं विभिन्न रोकथाम विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, कसरी यस प्रकारको आँखा सफा गर्न, तर बारम्बार र रोगबिना, कुकुरलाई रसायनको नजिक जानबाट रोक्नुहोस्, कुकुरको आँखा क्षेत्र नजिकैको कपाल काट्नुहोस् र पशु चिकित्सकमा निश्चित आवधिकताको साथ समीक्षा गर्नुहोस्।
यो कति लामो हुन्छ?
कुकुरहरूको नेत्रश्लेष्मशरण तीव्रता वा कारणमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईंको पालतु पशुहरूको आँखामा संयोजी ऊतकको सूजन शुरू गर्दछ। यो छोटो समयको रोग हो.
यो पनि कम गर्न को लागी उपचार पर्याप्त गरीरहेको छ कि मा निर्भर गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि सूजन कुकुरको लागि उपद्रव हो हामी द्वारा द्रुत कार्यमा महत्त्वपूर्ण रूपमा निर्भर हुन सक्छ.
कम से कम टिकाऊ केस ती हुन् जलन कोजाक्टिवाइटिस, जुन केहि दिनमा हल हुनेछ। यसको विपरित, भाइरल नेत्रश्लेष्मलाशोथ प्रायः सबैभन्दा लामो हुन्छ र कुकुरले यसको लक्षणहरू १ its दिनसम्म अनुभव गर्न सक्छ।
जीवाणु कंजक्टिवाइटिस प्राय: सात र दश दिनको बीचमा हुन्छ र एलर्जी पीडितहरूको मामलामा, विदेशी शरीरले गर्दा हुने ज्वलन केही दिनमै हराउन सक्छ। कि जनावर अब यस एलर्जीनको संपर्कमा छैन यस प्रकारको नेत्रश्लेष्मलाइटिस कम हुन्छ।
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँको कुकुर संग केहि केहि हुन सक्छ नेत्रश्लेष्मलाशोथ किनभने तपाईंले निश्चित तिनीहरूको आँखा जाँच गर्नुभयो र तपाईंले थोरै देख्नुभयो चिढचिलो, रातो वा सुख्खा.
सामान्यतया यो ठीक देखिन्छ कि जनावरले राम्रोसँग राम्रो देखिँदैन, वा तपाई त्यो देख्न सक्नुहुन्छ आँखाबाट पानी स्राव को एक प्रकार छ, जुन सब भन्दा शक्तिशाली अवस्थामा पहेंलो वा हरियो हुन सक्छ।
तपाईं उसलाई देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आँखा आफ्नो पजा प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै, केहि खुजलीले, साथ साथै प्रकाश लाई पनि अस्वीकार गर्न सक्छ, असुविधाको संकेतको रूपमा जुन सायद नेत्रश्लेष्मलाशोथ को कारण हो।
यो कसरी फैलिन्छ?
जब हामी एलर्जीको नेत्रश्लेष्मलाशोलाई हेर्दछौं, हामी कन्जाक्टिवाइटिसको एक प्रकारको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन संक्रामक छैन, तर एलर्जीको प्रतिक्रिया वा कर्नेलियाको क्षयसँग ठीकसँग गर्नुपर्दछ।
कुकुर बीचको फैलिएको नेत्रश्लेष्मलाइटम एक लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भाइरल जस्तै रोग। यस अवस्थामा, संक्रामक शक्ति वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ, अन्य कुकुरहरू र मानव जातिको लागि सार्न सक्षम हुनु।
क्यानाइन कन्जेक्टिवाइटिस एक रोग हो जुन उपचारको लागि केहि समय लिन सक्दछ पूर्ण रूपमा, तर पशु उपचारलाई घरेलु उपचारको साथ संयोजन गर्दै, तपाईंको प्यारी पक्कै पनि यसको मीठो दृश्य फेरि प्राप्त गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » रोगहरू » क्यानाइन कन्जेक्टिवाइटिसलाई निको पार्ने घरेलु उपचार
कसरी कुकुरहरूमा ग्यास्ट्रोएन्टेरिटिसको उपचार गर्ने?
कसरी तपाईंको कुकुरको कान काटेर फ्लाईहरू रोक्न सकिन्छ